Cusub Ubuntu Ganacsi Desktop Remix hadda waa la heli karaa | Laga soo bilaabo Linux
Canonical ayaa ku dhawaaqay sii deynta nooca ugu dambeeyay ee Ubuntu Ganacsiga Desktop Remix, oo ku saleysan Ubuntu 12.04 LTS. Sida magaceedaba ka muuqata, Ubuntu "dhadhanka" waxaa loogu talagalay adduunka ganacsiga.
Loogu talagalay Ururada ganacsiga iyo dowlada rabta inay qiimeyso adeegsiga Ubuntu, Business Desktop Remix waa sawir Ubuntu ah oo lagu geyn karo jawi shirkadeed ama loo isticmaali karo bar bilow ahaan u sii habeyn.
Shirkadaha badankood ee fuliya Ubuntu kumbuyuutarrada kumbuyuutarka ee kumbuyuutarrada ah waxay qabtaan hawlo isku mid ah. Sababtaas awgeed, cayaaraha, barnaamijyada warbaahinta bulshada, codsiyada wadaagga faylalka, iyo aaladaha farsamada waa laga saaray. Taabadalkeed, barnaamijkii ugu haboonaa ee jawi shirkadeed ayaa lagu daray, oo ay kujiraan VMware View, Flash-ka plug-in, iyo OpenJDK 6.
Ubuntu Remix Business Desktop wuxuu bixiyaa taageero luuqadeed oo buuxda labada nooc ee 32-bit iyo 64-bit ah, sida Ubuntu 12.04. Waxa kale oo ku jira taageerada la dhisay ee Microsoft Windows RDP 7.1 iyo soo dejiyaha Microsoft Visio diagram ee LibreOffice Draw.
Si ka duwan Ubuntu caadiga ah, diiwaangelinta ayaa loo baahan yahay si loo soo dejiyo Ubuntu Business Remix.
Soo Degso Ubuntu Business Desktop Remix
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Isticmaal FileLet » Cusub Ubuntu Business Desktop Remix hadda waa la heli karaa
Anigu ma aan aqoon isaga. Waad ku mahadsan tahay macluumaadka iyo faahfaahinta boostada.
Aasaaska doonista ... fikrad waalan oo aan in badan ka doodayay.